मेहनत, लगनशीलता र आत्मविश्वासले नै म मिस शेर्पा २०१७ भएँ – सोनाम डोल्मा – BRTNepal
बिआरटीनेपाल २०७४ पुष १६ गते ५:५८ मा प्रकाशित
सोनाम डोल्मा शेर्पा सौन्दर्य प्रतियोगिताहरुमा देखिने र चिनिएको नाम हो । सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु–दुधकुण्ड नगरपालिका–३ मा जन्मिएका उनी शारीरिक सुन्दरता, बौद्धिक क्षमताले पूर्ण सावित गर्दै सन् २०१७ का लागि ‘मिस शेर्पा’ घोषित भइन् । सन् २०१२ मा आयोजना भएको मिस शेर्पामा सहभागि भएपनि त्यसवखत उपलब्धी हासिल गर्न सकिनन् तर उनीमा ‘कुनै दिन मिस शेर्पाको ताज पहिरिएरै छाड्छु’ भन्ने आत्मविश्वास थियो । त्यो आज पूरा भएको छ । त्यस्तै, २०७३ को मिस नेपाल पिसमा वेस्ट वाल्कको उपाधी समेत जितिसकककेकी छिन् ।
२९ डिसेम्बरमा राजधानीको रोयल पाटी प्यालेशमा डिपास इन्टरनेश्नलले मिस शेर्पाको अन्तिम चरणको नतिजा घोषणा गर्दा उनले वेस्ट वाल्कको ‘सप टाइटल’ समेत हात पारिन् । १२ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै ताज पहिरिएकी सोनाम डोल्मा राजधानीकै कपनमा वस्दै आएकी छन् । स्नातक–तह नर्सिङ चौथो सेमेस्टरमा अध्ययनरत उनी विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध भएर समाजसेवामा पनि उत्तिकै सक्रिया छिन् । हिमालयन शेर्पा सांस्कृतीक केन्द्रमा केन्द्रीय सदस्य हुँदै अहिले सचिव पदमा रही काम गरिरहेकी उनी शेर्पा जातिको भाषा, संस्कार, संस्कृती, रितिरिवाजलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन र बढोत्तरी दिने मामिलामा क्रियाशिल केन्द्रमा आबद्ध रहेर शेर्पा समुदायको श्रीबृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेकी छन् ।
शान नर्सिङ कलेजमा अध्ययनरत उनी अध्ययनलाई पहिलो प्रथामिकतामा राख्छिन् भने अन्य बौद्धिक क्षमता विकास र सौन्दर्य प्रतियोगिताहरुमा सकेसम्म भाग लिने गरेकी छन् । शेर्पा समुदायलाई पर्यटनसँग मात्रै नभई हर क्षेत्रमा जोडिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने शेर्पाले समुदायको हितका लागि आफूले आगामी दिनमा चाल्ने कदमका बारेमा सञ्चारमाध्यम माझ खुलस्त भइन् । मिस शेर्पाको ताज पहिरिएपछि समुदायले राखेको अपेक्षा र उनले बुनेका योजनाका बारेमा पत्रकार लाक्पा जी शेर्पाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मिस शेर्पाको ताज पहिरिएपछि समुदायका लागि तपाईको भावी कार्यक्रमहरु के के छन् ?
वास्तवमै हाम्रो समुदायमा सुन्दरता प्रदर्शनलाई खास स्थान दिएको पाइँदैन । यसलाई अलि पश्चिमेली संस्कृती भनेर पनि आरोपहरु लगाइन्छ । तर, वास्तवमा आयोजना हुने ‘व्यूटि प्याजेन’हरु शारीरिक सुन्दरता प्रदर्शनका लागि मात्रै हैन । यहाँ त सौन्दर्यताको परीक्षा हुन्छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ । शारीरिक सुन्दरताले मात्रै छनौट यदि भए त्यो अपूर्ण हुन्छ । वास्तवमा शारीरिक सन्दरता, बौद्धिक क्षमताले अब्बल, नेतृत्वदायी क्षमता, कला, कौशलले यूक्त व्यक्तित्व छनौट गर्दै समाजको एक नमुना पात्र छान्ने कार्य नै सौन्दर्य प्रतियोगिता हो । यसलाई कुनैपनि नकारात्मक दृष्टिबाट हेरिनु हाम्रो बुझाईमा कमजोरी हुन आउँछ । तसर्थ, यी प्रतियोगिताहरुले प्रतिभाहरु जन्माउँछन्, अवसरहरु प्राप्त गर्ने विशिष्ट मञ्च र माध्यम निर्माण हुने र वास्तवमा समुदायमा सबै क्षमता, गुणले भरिपूर्ण व्यक्ति को हुन त ? भन्दै खोजि गर्दा प्राप्त गर्ने र उभिने माध्यम हो भनेर बुझ्नु पर्दछ ।
मोडलिङ आफैंमा चुनौति पूर्ण काम हो । हामी ‘मोडल’ बन्छौं तर खास मोडल भनेको ‘नमुना’ हो । हामी समाजको नमुना बन्न सक्नु पर्दछ । शारीरिक प्रदर्शन र अनुहार श्रृंगारिएर मात्रै मोडलको परिभाषा पूरा हुँदैन । मेरो यस क्षेत्रको प्रवेश संयोग हो, योजनाबद्ध हैन । वास्तवमा मेरो भावी योजना भनेको नर्सिङ मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने हो । त्यस्तै, खाली रहेको समयमा बौद्धिक विकास र व्यक्तित्व निर्माणको कार्यमा क्रियाशिल, संलग्न हुन मन पराउँछु । मिस शेर्पा मेरो लागि अवसरहरु प्राप्त गर्ने एउटा विशिष्ट माध्यम हो तर रंगिन क्षेत्रमा नै केही गर्छु भन्ने चाँही योजना हैन ।
यसअघि मिस शेर्पाको ताज पहिरिनु भएका अग्रज दिदिज्यूहरु हुनुहुन्छ । कतिपयसँग म अपरिचित पनि हुन सक्छु । मिस शेर्पा २०१२ का विजेता छिमी दिदिले त मलाई ताजै पहिरि दिनु भएको छ । म यस बर्षको मिस शेर्पाको हैसियतले सबैसँग समन्वय गरेर समाजलाई हित हुने खाले कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि अभियानहरु सञ्चालन गर्न प्रयास गर्नेछु । सबैसँग सम्पर्क समन्वयको माध्यमबाट नै सामाजिक हितका लागि कामहरु हुनेछन् ।